AKHRI: Madaxweyne Xaaf oo Xil ka qaadis ku sameeyay wasiir ka tirsan Galmudug + (Ogow Sababta ka dambeysay)! | HalQaran.com
AKHRI: Madaxweyne Xaaf oo Xil ka qaadis ku sameeyay wasiir ka tirsan Galmudug + (Ogow Sababta ka dambeysay)!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle Xaaf, ayaa Warqad uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu xilkii ka qaaday mid ka mid ah xubnaha Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Wasiirkii Qorsheynta Galmudug Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, waxaana xilkaas lagu amray inuu sii haayo Wasiiru Dowlaha Wasaarada Qorsheynta maamulkaas Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan inta laga magacaabayo Wasiir kale.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay xil ka qaadista lagu sameeyay Wasiirkaan ka tirsanaa Xukuumadda Galmudug, balse laga war helay warqadda xil ka qaadistiisa.
Maamulka Galmudug oo iminka ku sugan xaalad aanan sal fadhin ayaa shirar kala duwan waxa ay ka socdaan Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Hobyo ee Galmudug.
Axmed Ducaalle Geelle Xaaf
Madaxweynaha Maamulka Galmudug